XOG: Madaxweynaha Puntland oo booqanaya Saldhiga Imaaraatku gacanta ku hayaan ee Boosaaso, kagana dhawaaqi doona war xasaasi ah? – Puntlandtimes
XOG: Madaxweynaha Puntland oo booqanaya Saldhiga Imaaraatku gacanta ku hayaan ee Boosaaso, kagana dhawaaqi doona war xasaasi ah?
BOSASO(P-TIMES)- Madaxweynaha dawladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hadda kusugan magaalada Carmo ayaa booqana doona Isniinta berri ah saldhiga ciidamada Badda Puntland ee kuyaala duleedka magaalada Boosaaso, wuxuuna tagi doonaa dhamaan qeybaha uu ka kooban yahay, gaar ahaana halka Tababarada lagu bixiyo, Deked yar oo macmil ah iyo garoon diyaaradeed oo ay adeegsadaan diyaaradaha yar-yar ee dagaalka.
Madaxweynaha Puntland wuxuu warbixino ka dhageysan doonaa Saraakiisha xerada maamusha iyo taliska ugu sareeya ciidamadan oo ay ka wada hadli doonaan arrimaha soo kordhay iyo jawaabta rasmiga ah ee laga bixinayo.
Puntlandtimes.com waxay ogaatay in uu Madaxweynaha Puntland xalay xariir dhanka telfoonka ah wada yeesheen Madaxda dawladda Imaaraatka Carabta oo kusoo wargaliyey Madaxtooyada Puntland in aysan kabixin Puntland, balse arrinta dhacday ay hubin doonaan oo ay baaris ku jiraan.
Xogtu waxay sheegaysaa in uu Madaxweyne Gaas cadeyn doono mawqifkiisa ku wajahan arrimaha Imaaraatka Carabta, marka uu booqdo Saldhigan kuyaala magaalada Boosaaso, wuxuuna si gaar ah diiradda u saari doonaa muhiimada Imaaraatku u leeyahay Soomaaliya, gaar ahaana Puntland.
Imaraatku waxay raaligalin ka bixin doonaan shaqaalahoodii ka baxay madaarka Boosaaso, waxayna cadeyeen in aysan waxba iskabedelin Iskaashiga ay la wadaagaan Puntland, aysana saameyn doonin arrimaha siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda Faderaalka Soomaaliya & Imaaraatka Carabta.
Tan iyo dhamaadkii todobaadkii hore waxaa taagnaa xiisadda la xariirta taakulada ay Imaaraatka Carabtu siiyaan Soomaaliya, gaar ahaana dhanka Milateriga oo ay dawladda Faderaalka ee Muqdisho joojisay heshiiskii iskaashiga labada dal ee dhinaca ammaanka.
Saameyn deg deg ah ayay Puntland ku yeelatay talaabada ay qaaday Xukuumada Faderaalka, waxaana Khuburo, Tababarayaal & Shaqaale kale oo kusugnaa Saldhig lagu tababaro ciidamada Badda Puntland kana soo jeday Imaaraatka Carabta ay ka baxeen shalay Boosaaso, taas oo muujisay welwelka dhanka ammaanka ah iyo cidda la wareegaysa masuuliyadda ciidamadan.
WAY GARDARAN YIHIIN IMAADKU EE AAN MEL UGA SOWADAJESANO SOMALI OO DHAN
Qatar iyo Turki waxba Pl uma hadaan ee yaan laga basal dhicin Emirates reer puntalndoow.
Qatar iyo Turki waxba Pl uma hayaan ee yaan laga abaal dhicin Emirates reer puntalndoow.
IMAARAATKA WAX KA XUN OO KA LIITA MA JIRAAN. SOOMAALIYA WAXAY LA DEGGI WEYDAY WAA IYADA DANTEEDA GAARKA AH EE HALA CAYRIYO XAARAANTA KHAMIISYADA XUN
Waxaa waa siyaasad puntland maaha dowlad gaar u taagan mana yeelan karto go;AAN ka duwan kan ay qaadatay Dowladda Federaalka waa inay u hogaansanto go;aankaas dhaqaalaha iyo taakulada milatari ee aynasiiyaan turkiga iyo Qadar iyo saaxiibada aan leenahay ayay ka qayb noqonaysaa punttland ee dadka raba in aysan sal dhigan Qaranimadeena ayaa sikale u hadla Imaaraad aragnay khiyaanadiisii ee hana daayo ciidan la rabay in nalaku afgambiyo ayuu noo samaystay dhalinyaradeenii dalkeenii dhexdiisii areey xaa ku dhagara3.
Puntland waxay la mid tahay qof la kaalmeynayo oo haddana diiddan in la kaalmeeyo.
Imaaraatku idiin ma baahna maanta ee adinkaa u baahan.
Majeerteen talo xume awal baa lagu sheegay:
MASKAX YARE, MALLAAY XADHIG KU DABE, MURAMO NAAGOODLE.
MASEYRKII HOOYADII LAGU FURIYO, GABAY MAJEERTEENLE.
Imaaraadka hanoo joogo khaadar hanaka baxdo dhuuni raaca dowlada somaliya haraado SOMALIYEE SUAL KHADAR MEXAY TARtey??
Turkiga iyo qadar puntland waxba matataan
Imatadku 8 sano bui cidankan gacanta ku hayey
Dowladan al shabaabka ah iyo turkiga iyo qadar daba
Gamimeyno iyo fahad yassin iyo kheyre
war maxaa idinka quseeya wixii majeerteen ku taliyo war umada hada jirta ee la leeyahay waa soomaali hadaad halkaa dhalfadaada dhigato mid soomaali ah oo intuu soo qaato isku cam caminaayo ma weyneysid waar ordoo illaahey camal weydiista